Please Vote Pizza as Witness ( Henry Aung ) - PALnet
Please Vote Pizza as Witness ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ ယနေ့ကတော့ Cryptocurrency အကြောင်း ထွေထွေထူးထူး ရေးစရာမရှိပါ။ ရေးစရာမရှိခြင်းထက် မရေးလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေများ အတွက်တော့ တခု တောင်းဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်တော်တို့ သဘောကျသော PIZZA အား Witness အဖြင့် Vote ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
မိတ်ဆွေတို့သိသည့် အတိုင်း PIZZA သည် တအိအိဖြင့် ဈေးတက်လာသည်ကို မိတ်ဆွေတို့ သိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ Hive Engine ဈေးကွက်တွင် PIZZA သည် Leo အား တန်းတူး ယျဉ်နိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
နောက်တခု အနေဖြင့် မိတ်ဆွေများအား သတိပေးလိုသည်မှာ Pizza project သည် Hive platform တွင်ပို၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် Witness အဖြစ်တောင်းခံလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ထို့ ကြောင့် ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေများအား သတိပေးလိုသည်မှာ မိမိ Witness များအား ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ မိမိက Witness အဖြစ် Vote ပေးထားသော်လည်း Hive တွင် Active မဖြစ်လျင် ဖြုတ်ချလိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့၏ Hive platform အား မြှင့်တင်ပေးနေကြသူတို့အား Witness အဖြစ် vote ပေးကြရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ ယခု အချိန်တွင် Hive - Myanmar အနေဖြင့် Pizza အား ကြိုက်နေကြသည်မှာ အထူးပြောစရာမလိုပါ။
ထို့ကြောင့် PIZZA အား Hive platform တွင် ပိုမိုလုပ်ဆောင် နိုင်ရန် အတွက် @pizza.witness အား မိမိ witness အဖြစ် Vote ပေးကြရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ဤသို့ တိုက်တွန်း ခြင်း အတွက် ကျွန်တော်လည်း တပြားမှ မရပါ။
သို့သော် ကျွန်တော်တို့ Vote ခြင်းကြောင့် PIZZA သည် Hive witness 50 အထက် ရောက်လာလျင်ဖြင့် သူရို့ Project အတွက် ပိုအောင်မြင်လာစရာရှိပါသည်။ အပို မပြောတော့ပါ။ Please Vote @pizza.witness…. As our witness. PIZZA On ….
07/09/2021 - Tuesday - 19;34 Pm
hive-122133 myanmar pizza proofofbrain leo neoxian archon aeneas creativecoin palnet
@kachinhenry! This post has been manually curated by the $PIZZA Token team!
@kachinhenry! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @sheinthu.
thanks for new information! Voting Pizza as Witness
ဟုတ်အစ်ကို witness vote ပေးပြီးသားပါ။ လက်ဆောင် !PIZZA
Witness vote ? မန့်တိုင်း pizza တော့ကျွေးနေတာပ
Pizza နဲ့ ပါတ်သတ်တာလေးညွှန်ပြပေးပါ bro pls .
!PIZZA လေးကို သဘောကျလို့ လုပ်ပြီယေ။
ပီဇာလေးတွေ မကြာမီ စည်ကားလာတော့မည်။